दयाहाङ ‘भैरे’ बन्दै, बर्षा र सुरक्षामध्ये कोसँग रोमान्स ? « Mazzako Online
दयाहाङ ‘भैरे’ बन्दै, बर्षा र सुरक्षामध्ये कोसँग रोमान्स ?
अभिनेता दयाहाङ राई ‘भैरे’ बनेका छन् । यो फिल्मको राजधानीमा घोषणा भएको छ । एभेरेष्ट सूर्य बोहराको निर्देशनमा तयार हुन लागेको यो फिल्मको शिर्ष भूमिकामा अभिनेता दयाहाङ राइले काम गर्नेछन् । अभिनेता राइले फिल्म राम्रो बन्ने बताए ।
फिल्ममा उनको साथमा सुनिल थापा, बर्षा सिवाकोटी, सुरक्षा पन्त लगायतका कलाकार फिल्ममा देखिनेछन् । अभिनेत्री सिवाकोटीले फिल्मको कथा रमाइलो भएको भन्दै आफूलाई कथा मन परेकाले नै काम गर्न लागेको बताइन् । यस्तै, अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले पनि फिल्मको कथा रमाइलो भएको बताइन् ।
यो फिल्ममा प्रेम प्रसाद पौडेलको लगानी छ । देविमाया अधिकारी फिल्मका कार्यकारी निर्माता हुन् । फिल्ममा यम बराल, लेख बहादुर गुरुङ र रघु पुरी सह-निर्माताको रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् । यो फिल्मको छायांकन मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुनेछ । ४० दिन लगाएर फिल्मको छायांकन उपल्लो मुस्ताङ, पोखरा र काठमाण्डौमा खिचिनेछ । पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहने फिल्ममा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहनेछ । फिल्ममा यम बराल, बसन्त सापकोटा र अर्जुन पोखरेलको संगीत छ ।